1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode
1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode
1570nm Coaxial DFB Laser Diode သည်ဖိုင်ဘာတစ်ခုတည်းသော optical fiber နှင့်တွဲဆက်သည်။ CW output စွမ်းအားများသည်လှိုင်းအလျားကိုမှီခိုပြီး 2mW နှင့် 4mW ကြားတွင်ရှိသည်။ ဖြန့်ဝေထားသောတုံ့ပြန်ချက်အခေါင်းပေါက်သည်လိုင်းအကျယ်ကို ၀.၃၂nm မျှသာထုတ်လုပ်သည်။ ထိုလေဆာရောင်ခြည်များသည်မော်နီတာတွင်ပါသော photodiode နှင့် optical isolator တို့ပါ ၀ င်သည်။ SMF 28 optical output fiber ကို SC / PC, FC / PC, SC / APC သို့မဟုတ် FC / APC connectors နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ၏နိဒါန်း
1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ၏ 3. အင်္ဂါရပ်များ
4. 1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1560 1570 1580 nm
6. Package drawing & PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1570nm Coaxial DFB လေဆာရောင်ခြည်
7. 1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1570nm Coaxial DFB လေဆာ Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်စျေးပေါ, စျေးနှုန်းနိမ့်, အရည်အသွေး